DO35 အဝါရောင်စာမျက်နှာများ_Free Posts_Professional B2B ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမြှင့်တင်ရေးပလက်ဖောင်း - do35 မှစတင်သောကုမ္ပဏီများရှာဖွေရန်ထုတ်ကုန်များကိုရှာဖွေသည်။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက်: အတွင်းပိုင်းစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်, ရေတိုစီးပွားဖြစ်အသုံးပြုမှုမဖြစ်နိုင်ပါ။
Service ကိုနိဒါန်း Service ကိုနှိုင်းယှဉ် အသင်းဝင်ဝန်ဆောင်မှု လက်ရာမြောက်သောဆိုင်များ
ရာထူးမြှင့်တင်ရေး Mall ကထောက်ပြသည် တုံ့ပြန်ချက် ဆက်သွယ်ရန်
ရွှေ Advertising ကြော်ငြာ
Advertising ကြော်ငြာန်ဆောင်မှုများ အကြှနျုပျ၏ကြော်ငြာ
ကုန်ပစ္စည်း အရစ်ကျ ပြန်ကြားရေး
ကုန်ကြမ်း Coating အဆောက်အဦးအပြင်အလင်းအိမ် ယန္တရား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး လမ်းအလင်း အလင်းရောင် အတွင်းခံအဝတ်အစား / အကျဉ်း နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံး စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ရေတွင်ပျော်ဝင်ဆေးသုတ်ကော်
ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd Xiamen Fei Linghai
မြို့ Creek အဘိဓါန် Yangxi ကောင်းသောအနားသတ်အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်
ဟန်ကျိုးဂလားပင်လယ်အော် Qiaosi ၏ Yuhang ခရိုင်ထက်ပိုဖိနပ်စက်ရုံများမှ
/စက်ယန္တရားနှင့်ကိရိယာ /စက်မှုလက်မှုစက် /အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း /စားနပ်ရိက္ခာ Machinery /ဓာတုပစ္စည်း /သတ္တုတွင်းကိရိယာများ /သတ္တုနှင့်တွင်းထွက်ပစ္စည်း
အဆိုပါဖိနပ်လုပ်ငန်း Yancheng ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလယ်ကိုပြန်
/ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း /အဆောက်အအုံပစ္စည်းများနှင့်နေအိမ်တိုးတက်မှု /ချည်ငင် /အဆိုပါဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် /ပလပ်စတစ် /ကာကှယျပစ္စည်း /橡胶
Qinzhou စီးတီး Qinbei ဝေ Fung ထရေးဒင်း (Micro-လုပ်ငန်းများ)
/အစားအစာနှင့် Beverage /မျိုးစပါးနှင့်ပျိုးပင်များ /ငါးလုပ်ငန်းနှင့်ငါးမွေးမြူရေး /ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာ /လက်ဘက်ရည် /ထိုဥယျာဉ်ကိုပန်းပွင့် /ဟင်းသီးဟင်းရွက်
လက်ဆောင်များ & လက်မှုပညာ
ကွန်ပျူတာနှင့် Software များ
/အလင်းရောင် /အဝတ်အစား /အိမ်ထောင် /ပစ္စည်းများ /အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ /ဖက်ရှင်လက်ဝတ်ရတနာ /အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ
ကို Maintenance နှင့်တပ်ဆင်ခြင်း
/သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး /Real Estate /စက် /Advertising ကြော်ငြာ /ကုန်စည်ပြပွဲညီလာခံ /ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနှင့်သိုလှောင် /ခရီးသွားဝန်ဆောင်မှု
5730 မီးခွက်ပုတီး 0.5W အဖြူရောင်အလင်းပုတီး
3030 ဆီမီးခွက်ပုတီးဆီမီးခွက်ပုတီး ဦး ဆောင်ခဲ့သည်
50W LED မီးသီး downlight
220V မြင့်ဗို့အားဆီမီးခွက်ဘုတ်အဖွဲ့ 2835
ဒေါင်လိုက်ဆီမီးခွက်ပုတီးကျောက်သလင်း core ကို
Sanan 5050 ဆီမီးခွက်ပုတီးစေ့
3AA ဘက်ထရီသေတ္တာ5မီတာ 50LE
12 ဒီဂရီ COB မှန်ဘီလူးချောမွေ့မျက်နှာပြင် L ကို
[ကြေညာချက်] ထုတ်ကုန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်မှတ်စုထုတ်ဝြေခင်း do35 အဝါရောင်စာမျက်နှာများ
[ဝယ်သူ] ကိုအင်တာနက်ထဲမှာ Single-ထုတ်ကုန်အောင်မြင်မှုရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်မဝယ်ချင်ပါဘူး
မည်သို့ [ဝယ်] ဝယ်အမိန့်လက်ခံ?
[ရောင်းချသူ] ကျွန်မရဲ့တစ်ခုတည်းသောထုတ်ကုန်အကွာအဝေး, ငါတို့သည်အဘယ်သို့ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိနျးသိမျးနိုငျ
[လုပ်ငန်းသတင်း] Metso Crusher ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတင်းကျပ်စွာကြောင့်ပျက်စီးသွားသည်
发布时间：2019-11-14 14:03 ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
发布时间：2017-10-15 13:44 ဘေဂျင်း ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
发布时间：2018-05-17 00:38 ဟူဘေး - ဝူဟန် ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
ပြန်သုံးပြန်သုံး Blancpain နာရီကုမ္ပဏီ watch ဘယ်မှာ Mudanjiang
发布时间：2017-09-21 23:31 ဟူဘေး - ဝူဟန် ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
Anxi ဘယ်မှာပြန်သုံးဒုတိယ-လက်နာရီ, Longines ဘယ်မှာပြန်လည်နာလန်ထူ
ဟူဘေးပြည်နယ် Qing ဘယ်လောက်စစ်မှန်တဲ့နှင့်မှားယွင်းသောမှာကြေးနီကြည့်ထား
发布时间：2017-12-16 14:57 ရှန်ဟိုင်း ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
发布时间：2017-09-21 23:32 ရှန်ဟိုင်း ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
Qianlong ရဲ့ကျောက်စိမ်းပန်းကန်ကဘာလဲဝိသေသလက္ခဏာများ၏ identification
ပြန်လည်နာလန်ထူ Benxi watch ဘယ်မှာရှိသနည်းအသုံးယံ _ မည်မျှပြန်လည်?
发布时间：2017-09-21 23:32 Guangdong-Shenzhen ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
ဘယ်မှာစစ်မှန်သောအစာရှောင်ခြင်း, shot Qianlong ကျောက်စိမ်းပန်းကန်ရုပ်ပုံလွှာ
发布时间：2017-09-21 23:32 လျောင်းနင်ချောင်း ကြည့်ရန်အသေးစိတ်အချက်အလက်
[NEW]ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd Xiamen Fei Linghai
[NEW]မြို့ Creek အဘိဓါန် Yangxi ကောင်းသောအနားသတ်အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်
[NEW]ဟန်ကျိုးဂလားပင်လယ်အော် Qiaosi ၏ Yuhang ခရိုင်ထက်ပိုဖိနပ်စက်ရုံများမှ
[NEW]Chao Vision ၏ဖိနပ် Co. , Ltd
[NEW]ဒန်နီ Tianhe ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး Shaheed အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်
[NEW]Ltd. , ကွမ်ကျိုး Wong က Tai ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ,
ထိပ်တန်း Categories: စက်ယန္တရားနှင့်ကိရိယာ စက်မှုလက်မှုစက် အင်ဂျင်နီယာနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်ပစ္စည်း စားနပ်ရိက္ခာ Machinery ဓာတုပစ္စည်း
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီ Cr12MoV Light Plate Cold Work MJG
Foshan Shunde ခရိုင် Taiyuan လက်လီ Cr12MoV Forgings Cold Work MJG
Foshan Shunde ခရိုင်စက်ရုံ Taiyuan လက်လီ X210Cr12 Forgings Cold Work MJG
Foshan Shunde ခရိုင်စက်ရုံ Taiyuan လက်လီ Electroslag DC53 အတုပြားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်းအအေးခန်း MJG
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီအရောင်းဆိုင် Electroslag DC53 အသေးစိတ်အချက်အလက်အတတ်ပညာသုံးပစ္စည်းများအအေးခန်း MJG
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီလျှပ်စစ်မီးဖို DC53 Forging Plate Specification ပစ္စည်းအအေးခန်း MJG
Foshan Shunde ခရိုင်စက်ရုံ Taiyuan လက်လီ Electroslag 4Cr5MoSiV1 အတုပြားပြားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း Hot Work MJG
Foshan Shunde ခရိုင်စက်ရုံ Taiyuan လက်လီ Electroslag 4Cr5MoSiV1 သံမဏိအတုစက်ဝိုင်းသတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်းပူအလုပ် MJG
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီလျှပ်စစ်မီးဖို 4Cr5MoSiV1 သံမဏိအတုပြားပြားအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်း Hot Work MJG
Foshan Shunde ခရိုင်စက်ရုံ Taiyuan လက်လီလျှပ်စစ်မီးဖို 4Cr5MoSiV1 သံမဏိအတုစက်ဝိုင်းသတ်မှတ်ချက်ပစ္စည်းပူအလုပ် MJG
Foshan Shunde ခရိုင် Taiyuan လက်လီ Cr12Mo1V1 အတုပြားပုံစံအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်အအေးခန်း MJG
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီ Cr12Mo1V1 အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်အအေးခံ MJG
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီ Cr12MoV အတုပြားများအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပစ္စည်းအအေးခန်း MJG
Foshan Shunde ခရိုင် Taiyuan လက်လီ Cr12MoV ပတ် ၀ န်းကျင်ဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ပစ္စည်းများ Cold Work MJG
Chao Vision ၏ဖိနပ် Co. , Ltd
ဒန်နီ Tianhe ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး Shaheed အဝတ်အစားစတိုးဆိုင်
Ltd. , ကွမ်ကျိုး Wong က Tai ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ,
အကြံပြုထုတ်ကုန်များ VIP ထုတ်ကုန်များ
Foshan Shunde ခရိုင်စက်ရုံ Taiyuan လက်လီ Cr12Mo
Foshan Shunde ခရိုင် Taiyuan လက်လီ X210Cr
Foshan Shunde ခရိုင်ထုတ်လုပ်သူ Taiyuan လက်လီအရောင်းဆိုင် Electroslag DC
Cree ခရီး XLamp CXB2540
Cree ခရီး XLamp CXB2530
Cree ခရီး XLamp CXB2520
Cree ခရီး XLamp CXB1830
Cree ခရီး XLamp CXB1820
Cree ခရီး XLamp CXB1816
Cree ခရီး XLamp CXB1512
Cree ခရီး XLamp CXB1507
Cree ခရီး XLamp CXB1304
Cl Xlamp XT-E
Cree ခရီး Xlamp XP-G ကို
Cree ခရီး Xlamp XP-E ကို
Cree ခရီး Xlamp XM-L ကို
Cree ခရီး Xlamp XB-D ကို
Cree ခရီး J ကိုစီးရီး 3030
CREE CXA2540 COB ဆီမီးခွက်မီးပုတီးအလင်း
CREE CXA2530 COB ဆီမီးခွက်မီးပုတီးအလင်း
CREE CXA2520 COB ဆီမီးခွက်မီးပုတီးအလင်း
CREE CXA1830 COB ဆီမီးခွက်မီးပုတီးအလင်း
CREE CXA1820 COB ဆီမီးခွက်မီးပုတီးအလင်း
CREE CXA1816 COB ဆီမီးခွက်မီးပုတီးအလင်း
[NEW]အဆိုပါဖိနပ်လုပ်ငန်း Yancheng ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလယ်ကိုပြန်
ထိပ်တန်း Categories: ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း အဆောက်အအုံပစ္စည်းများနှင့်နေအိမ်တိုးတက်မှု ချည်ငင် အဆိုပါဓာတ်ကူပစ္စည်းသည် ပလပ်စတစ်
Ethylene glycol bis (2-aminoethyl အီ) tetraacetic acid / EGTA စက်ရုံတွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း
လီသီယမ် difluorooxalate borate စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း
လီသီယမ် bistrifluoromethanesulfonimide စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းအား
လက်ကားခရိုမီယမ် picolinate ထုတ်လုပ်သူ
သံ acetylacetonate ပွဲချင်းပြီးထုတ်လုပ်သူရောင်းအား
ဗန်နာဒီယမ် acetylacetonate ထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
96% propargyl oxadiazone စက်ရုံ၏တိုက်ရိုက်ရောင်းအား
Pyraclostrobin 97% ကိုပွဲချင်းပြီးထုတ်လုပ်သူများမှရောင်းချသည်
glufosinate ammonium ဆားထုတ်လုပ်သူများ၏ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်လက်ကားရောင်းအား
Prochloraz မန်းဂနိစ်ဆား ၅၀% WP စက်စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်အရောင်း
Enoylmorpholine 80% WDG ကြီးမားသောထုပ်ပိုးစက်ရုံတွင်တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း
Difenoconazole 37% WDG စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းအား
Sulfasulfuron ၇၅% WDG စက်ရုံများသည်ကောင်းစွာရောင်းချသည်
Ethylene glycol bis (2-aminoethyl အီ) tetraacetic acid / EGT
လီသီယမ် bistrifluoromethanesulfonimide အစက်အပြောက်ထုတ်လုပ်သူများကတိုက်ရိုက်
အဆောက်အဦးအပြင် 4MM ဆီလီကွန်အမြှုပ်ဆောင်းပါးသိပ်သည်းဆီလီကွန်လက်စွပ်
NO.1258 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကိုဆီလီကွန် pad ပါ
NO.0107 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကိုဆီလီကွန် pad ပါ
NO.1259 # ပြင်ပတွင်မြို့ရိုးကိုရေစိုခံဆီလီကွန်တံဆိပျကိုလက်စွပ်
ကဒ်အထိုင်အတွက်အထူရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကိုဆီလီကွန် pad ပါ 0
ချွတ်ချွတ်ရေစိုခံဆီလီကွန် Multi-standard edging အတွက် 5
NO.0056 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကို Silicon
NO.0108 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကို Silicon
NO.0065 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကိုဆီလီကွန် pad ပါ
NO.1195 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကိုဆီလီကွန် pad ပါ
silicone အမြှုပ်ဆောင်းပါး Multi-standard ဆီလီကွန်တံဆိပ်ခတ်စေခြင်းငှါ
ရေစိုခံ Non-စလစ်ဆီလီကွန် strips တွေအခမဲ့နမူနာရဖို့စိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်
NO.1226 # ရေစိုခံဆီလီကွန်လက်စွပ်တံဆိပျကိုဆီလီကွန် pad ပါ
NO.1217 # ပြင်ပတွင်မြို့ရိုးကိုရေစိုခံဆီလီကွန်တံဆိပျကိုလက်စွပ်
ရော်ဘာအို-လက်စွပ်ထုံးစံရေစိုခံ NO.1130 နှင့် dustproof
အဆောက်အဦးအပြင်မြို့ရိုးကိုရေစိုခံ Multi-standard High-အပူချိန်ဆီလီကွန်ချွတ်
[NEW]Qinzhou စီးတီး Qinbei ဝေ Fung ထရေးဒင်း (Micro-လုပ်ငန်းများ)
ထိပ်တန်း Categories: အစားအစာနှင့် Beverage မျိုးစပါးနှင့်ပျိုးပင်များ ငါးလုပ်ငန်းနှင့်ငါးမွေးမြူရေး ပိုးသတ်ဆေးနှင့်ဓာတ်မြေသြဇာ လက်ဘက်ရည်
95% off-the- ကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းစက်ရုံထွက်ပေါက်
Sulfasulfuron 98% သည်တိုက်ရိုက်ရောင်းအားကိုပြသည်
Izaclofen ထုတ်လုပ်သူ ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ထားကြသည်
azaprocone လက္ကား၏ 96%
95% bispyribole တိုက်ရိုက်စက်ရုံတိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု
Methoxymethane 96% စက်ရုံအစက်အပြောက်တိုက်ရိုက်ရောင်းချမှု
Phenoxazone ၉၅% သည်စတော့ရှယ်ယာထုတ်လုပ်သူများထံမှလက်ကားရောင်းသည်
စတော့ရှယ်ယာထဲတွင် penoxsulam ၏ 95%
ray ငါးဖမ်း leiyuu အလင်းသေးငယ်တဲ့ကင်းမွန် 250g ယူကရိန်းအခြောက်
ray ရေနက်ငါးဖမ်း leiyuu သေးငယ်တဲ့ abalone ခြောက်သွေ့တဲ့ 100g ဗုဒ္ဓ
Sun-အခြောက်ပုစွန်ဖြူဖပ်ဖြူရောပုစွန်ဆားခန်းခြောက် leiyuu ray ငါးဖမ်း
စပိန် mackerel လတ်ဆတ်အေးခဲရိုင်းဟိုင်နန် Wenchang3ကီလိုဂရမ်
ray ငါးဖမ်း leiyuu နေရောင်ကြီးမားသော scallops scallops FullBand ဖျော့ 50
ray ငါးဖမ်း leiyuu mussels Haihong ခြောက်သွေ့တဲ့အသား 500
ray ငါးဖမ်း scallops အထူး 500g ကလေးအလင်းခြောက်သွေ့တဲ့ယွမ် scallop
ထိပ်တန်း Categories: အလင်းရောင် အဝတ်အစား အိမ်ထောင် ပစ္စည်းများ အော်တိုအစိတ်အပိုင်းများ
5730 lamp bead 0.5W အဖြူရောင်အလင်းနွေးသောအလင်းကြားနေအလင်း 5730led SMD ကြေးနီကွင်းခတ်မြင့်မားသောတောက်ပမှုကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်
5730 lamp bead 0.5W အဖြူရောင်အလင်းနွေးထွေးသောအလင်းကြားနေအလင်းမြင့်မားသောအလင်းရောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ဦး ဆောင်သောအချပ်ကြေးနီကွင်းခတ်အစက်အပြောက်ထောက်ပံ့ရေးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
5730 lamp bead 0.5W အဖြူရောင်အလင်းနွေးသောအလင်းကြားနေအလင်း 5730led SMD ဆီမီးခွက်ပုတီးကြေးနီကွင်းခတ်အစက်အပြောက်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်
5730 မီးချောင်းပုတီး 0.5W အဖြူရောင်အလင်းနွေးထွေးသောအလင်းအနီရောင်အစိမ်းရောင်အပြာအဝါရောင်အမှုန့်အလင်း 5730led SMD ဆီမီးခွက်ပုတီးလုံးပုတီးကြေးနန်း \_ t
3030 ဆီမီးခွက်ပုတီးကမီးခွက်ပုတီး Sanan chip ကို wafer chip ကို 3V6V အဖြူရောင်အလင်းနွေးအလင်း 3030 SMD ဆီမီးခွက်ပုတီးအစက်အပြောက်
အင်ဂျင်နီယာ ဦး ဆောင်သောမီးအိမ်ဘုတ်အဖွဲ့ 3W579 12W မီးအလင်းရောင်ပူဖောင်းဘားမှမုန့်ညက်ခံနိုင်သောမီးခွက် ၂၈၃၅ SMD ဆီမီးခွက်ဘုတ်အဖွဲ့မီးလုံးပုတီးပုတ်ဘုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းဘုတ်
18W LED မီးသီး downlight lamp lamp 18W 85 100 120 145MM5730 ဆီမီးခွက်မှအလင်းရောင်ဘုတ်ပြားအစက်အပြောက်ကို ဦး ဆောင်သည်
5730 မီးခွက်ပုတီးပုတီး 0.5W အဖြူရောင်အလင်းနွေးအလင်းကြားနေအလင်း 5730
5730 ဆီမီးခွက်ပုတီး 0.5W အဖြူရောင်အလင်းနွေးအလင်းကြားနေအလင်းမီးမောင်းထိုးပြ
5730 ဆီမီးခွက်ပုတီးစေ့ 0.5 အဖြူရောင်အလင်းနွေးအလင်းကြားနေအလင်းအနီရောင်အစိမ်းရောင်
LED ခြင်း simulation ginkgo သစ်ပင်အပြင်ဘက်အလင်းရောင်လမ်းကုန်သည်
LED ခြင်း simulation အသီးသစ်ပင်အလင်းရောင်ပွဲတော်စီးရီးထုတ်ကုန်
သေးငယ်တဲ့ခြင်း simulation သစ်ပင်အလင်းပွဲတော်စီးရီးထုတ်ကုန် LED
အသေးစား Outdoor Simulator သစ်ပင်အလင်းပွဲတော် Mall
LED အလင်း RGB သစ်ပင်အလင်းအသွင်သဏ္ဌာန်ဥယျာဉ်ရှုခင်းပစ္စည်းကိရိယာများ
LED simulation မိုးမခအလင်း wrought iron မော်ဒယ်လင်း
LED simulation ချယ်ရီပင်သစ်သားသံမော်ဒယ်အလင်း
LED simulation မိုးမခသံမဏိမော်ဒယ်လင်းပွဲတော်
ထိပ်တန်း Categories: သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Real Estate စက် Advertising ကြော်ငြာ ကုန်စည်ပြပွဲညီလာခံ
戦缃戦 Check 槣缃戦〉 璁လှူဒါန်းပါ
Paper OA Paper €寮စက္ကူကစားခြင်း阃熻揪缃戠粶阃阃熻揪缃缃戠粶阃俊俊 Paper
Qufu 400 တယ်လီဖုန်းသုံးစွဲခြင်း (Suda ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု)
Qufu APP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Suda Communication)
Qufu ERP ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု (Suda Network Communication)
Qufu ဆော့ဖ်ဝဲ (Suda Communication) ကိုစိတ်ကြိုက်တီထွင်ခြင်း
Qufu ဝက်ဘ်စာမျက်နှာထုတ်လုပ်မှု (Suda Communication)
Qufu ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်း (Suda Communication)
Qufu ဝဘ်ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှု (Suda Network Communication)
Qufu ဝဘ်ဆိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (Suda Communication)
Chengdu Tianhu သည် LBS multi-camera e-commerce တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုစနစ်အိတ်ဆောင် VH ဗားရှင်းကိုထောက်ပံ့ပေးသည်
အထူး Coates, သုတ်ဆေး, ရေ-based ဆေးသုတ်, ကြမ်းပြင်ဆေးသုတ်
အဖွဲ့ဝင် #1909161750 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတွန်းအားပေးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်မှုက်ဘ်ဆိုက်ဆောက်လုပ်ရေးက်ဘ်ဆိုက်ထုတ်လုပ်မှုကို
Qufu 400 ဖုန်းအသုံးပြုခွင့် (Suda ကွန်ယက်ဆက်သွယ်မှု
အဖွဲ့ဝင် #201909161638 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးတွန်းအားပေး
အဖွဲ့ဝင် #201909161259 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးတွန်းအားပေး
Qufu ဆော့ဖ်ဝဲ (Suda Network Communication) စိတ်ကြိုက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
Chengdu Tianhu သည် LBS multi-camera e-commerce ကိုတိုက်ရိုက်ထောက်ပံ့ပေးသည်
Zhongshan လုံခြုံအိမ်သူအိမ်သားကeစီးပွားရေးချေးငွေ (အမျိုးသားအိမ်ခြံမြေ
ဂျပန် 12 အရောင်ရွှံ့ရွှံ့အရောင်အစုံမှတင်သွင်း Silver, Bird ကိုဆန်
အကြံပြုထုတ်ကုန်များ အကြံပြုထားသည့်ကုမ္ပဏီများ နောက်ဆုံးပေါ်ကုမ္ပဏီအခြေချ
5730 မီးခွက်ပုတီးစေ့ 0.5 အဖြူရောင်မီးနွေးအလင်းကြားနေအလင်းအနီရောင်စိမ်းပြာရောင်အဝါရောင်အမှုန့် 57
3030 ဆီမီးခွက်ပုတီးဆီမီးခွက် wafer chip ကို 3V6V အဖြူရောင်အလင်းအိမ်မီးခွက်ပုတီး ဦး ဆောင်
3WRGB ဆီမီးခွက်မြင့်မားသောစွမ်းအင်သုံး RGB မီးခွက်သည်မြင့်မားသောပါဝါအပြည့်ရှိသောအလင်းရောင် macro ကိုပုတီးစေ့
50W LED မီးသီး downlight lamp lamp board 50W112.8 145 225MM557
220V high voltage lamp board သည် 2835 linear lamp board တွင် led lamp board ပြွန်အားမောင်းနှင်ခြင်းမရှိဘဲ
LED တစ်ဦးကလေဆာရောင်ခြည် diode
ဒေါင်လိုက်ဆီမီးခွက်ပုတီးလုံးကြည်လင်စွမ်းအင်ချစ်ပ် 35mil မြင့်ပါဝါဆီမီးခွက်ပုတီး 3w ကြည်လင်စွမ်းအင်
1w high-power led lamp beads 2w တုပသော lumen lamp beads RGB သည်အနီရောင်နှင့်အစိမ်းကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်
LED chip ကိုအပြောင်းအလဲနဲ့
Sanan 5050 ဆီမီးခွက်ပုတီးလုံးအဖြူရောင်အလင်းနွေးအလင်း 18-20LM5050led patch ကို
အမေဇုံပေါက်ကွဲမှုပုံစံသည်တောက်ပသော ဦး ဆောင်သောစပျစ်ရည်ပုလင်းအဆို့ကြိုးငွေဝါယာကြိုးကြေးနီဆီမီးခွက်
3AA ဘက်ထရီသေတ္တာ5မီတာ 50LED ကြေးဝါဝါယာကြိုးမီးအိမ်ဆန်ကိုအလှဆင်မီးခွက် string ကိုမင်္ဂလာဆောင်
LED မြင့်မားသောပါဝါခွက်သဲမှန်ဘီလူးအချင်း 15MM optical မှန်ဘီလူး acrylic
၁၂ ဒီဂရီ COB Lens Glossy LED Light ၃၅ မီလီမီတာမီးအလင်းဖြင့်တည်နေရာပြကော်လံနှင့်အတူ
Luminous တစ်ခုတည်းသောမှန်ဘီလူး LED မှန်ဘီလူး 1W optical 20 ပွင့်လင်းရောင်ပြန်
စက်ရုံလက်ကား AliExpress eBay Amazon Acrylic Siamese lens
3-5 ဒီဂရီခုံးထောက်ခံမှုမှန်ဘီလူး, အလင်းမှန်ဘီလူးတစ်ရောင်ခြည်, မြင့်မားသောပါဝါ LED မီးခွက်
COB အလင်းအရင်းအမြစ်ချစ်ပ် 2820 လှန် LED မီးအိမ်ပုတီးတောက်ပရုပ်ရှင်လမ်းကြောင်းအလင်းရိုက်ချက်
COB အလင်းအရင်းအမြစ် 1411 လှန်မီးခွက်တောက်ပရုပ်ရှင်လမ်းကြောင်းအလင်းမီးမောင်းထိုးပြွန်ပုတီး
ထုတ်လုပ်သူထုံးစံ acrylic စက်မှုနှင့်သတ္တုတွင်းမီးခွက်စားပွဲတင်မီးအိမ် chandelier ပန်းပွင့်ခြင်းတောင်းကိုစွမ်းအင်ချွေတာ
စက်ရုံလက်ကားစွမ်းအားမြင့်ပါ ၀ င်သည့်ပေါင်းစပ်အလင်းအရင်းအမြစ် Puri 45 power high
ထုတ်လုပ်သူများလက်ကားစွမ်းအားမြင့်ပါ ၀ င်သည့်ပေါင်းစပ်အလင်းအရင်းအမြစ် wafer 33 high power
စက်ရုံလက်ကား 1W စွမ်းအားမြင့် RGB ဆီမီးခွက်ပုတီးလုံးကွင်းရောင်စုံမီးလုံးပုတီး
စက်ရုံလက္ကား 1-3w high power led lamp beads 280-300lm တုပလွင့်များ
LED SMD lamp သည် 7070 နွေးသောအဖြူရောင်အလင်းနှင့် 3200K အရောင်အပူချိန် 1W မြင့်မားသောပါဝါဖြူသည်
စွမ်းအားမြင့် 6-pin RGB lampa ပုတီးစေ့အစိမ်းအနီရောင်အပြာထိုင်ဝမ်ပေ tile lamp lampad ပုတီး
ပေါက်ကွဲမှုပုံစံများ 3030 lamp beads 3030 lamp beads 6V အဖြူရောင်ရွှေရောင်အလင်းရောင်ရှိသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုစတစ်ကာများ
30w ဘက်ပေါင်းစုံအလင်းအရင်းအမြစ်စက်ရုံမှတိုက်ရိုက်ရောင်းအား 50w wafer 30mil စက်မှုနှင့်သတ္တုတွင်းမီးခွက်လမ်း
Epistar မီးခံပလပ်စတစ်ဖြင့်ပေါင်းစပ်ထားသောမီးချောင်းသည် epistar မီးမောင်းထိုးပြသည့် 100w set
LED မီးလုံးပုတီးအမေရိကန်မူလချစ်ပရီ Puri လမ်းမီးလုံးမီးလုံးပုတီး 1W3W universal
1w high power led wafer ၃၃ အဖြူရောင်မီးနွေးရောင်သဘာဝအလင်းအလင်းစွမ်းအင် le
High-power led lamp beads ထိုင်ဝမ် Epistar 30 တုပသော lumen led lamp ပုတီးသည်ယခုအခါဖြစ်သည်
၇၅ မီလီမီတာသေဆုံးသော LED ဟိုတယ်နံရံကပ်အဝတ်လျှော်မီးမောင်းထိုးသေနတ်အရောင်ခွက် C ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်း
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြည်ပသို့တင်ပို့သော COB ကျသည့် COB downlight အိမ်ရာကိရိယာ LED မျက်နှာကျက်အလင်းရောင်
၇၅ မီလီမီတာသေဆုံးနိုင်သော LED မျက်နှာကျက်မီးအလင်းရောင်အိမ်ရာကိရိယာဟိုတယ်
Zhenjiang ခရိုင် Longxin Co. , Ltd မှ
Yuyao စီးတီး Zhuo Jinfeng ဟာ့ဒ်ဝဲပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းကို
Ltd. , Pingyu အစိမ်းရောင်အလှကုန်ကုမ္ပဏီ
ကွမ်ကျိုး Baiyun ခရိုင် Sanyuanli Ozawa အလှကုန်စီးပွားရေး
Ltd. , Zhejiang Daya အလှကုန်ကုမ္ပဏီ
Shantou Chenghai Yanhong Michelle အလှကုန်ဆိုင်
ဓာတု Co. , Ltd ၏ Wujiang စီးတီး
ဘေဂျင်း Arden ကုန်သွယ်ရေးစင်တာတွင် Cool
Foshan စီးတီး, တောင်တရုတ်ပင်လယ်, Kai ပလတ်စတစ်မှို Co. , Ltd
အလှကုန် Co. , Ltd ကွမ်ကျိုး OU Poya
Dongguan စီးတီး၏, Ltd. Jiaze အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီ
Ltd. , နန်နင်းဆန်းသစ်တီထွင်မှုနှင့်နည်းပညာဆေးဝါး Co. ,
Luohu ခရိုင်, ရှန်ကျန်းမြို့, အမဏ္ဍိုင်အလှကုန်ဆိုင်တွေမှာ
Ltd. , Weifang အားရီ-ကုန်သွယ်ရေးဖွံဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ
ဖူ Zhongyi နေရောင်ခြည်နည်းပညာ AG က
Ningbo မြောက်လွန်း Aibo Machinery Co. , Ltd
Ltd. , လဲ့ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်အားဖြင့်ရှန်ဟိုင်း
ကွမ်ကျိုး Jianhui ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီ
Ltd. , Jinan Yonghong ဓာတု Co. ,
Hubei Zhengxingyuan Fine Chemical Co. , Ltd.
Dongguan စီးတီး, Da Lingshan အားလုံး processing ဟာ့ဒ်ဝဲစတိုးဆိုင်ဆင်နွှဲ
Foshan စီးတီး၏ Nanhai ခရိုင်, ရော်ဘာကုန်ကြမ်း Co. , Ltd ဖြစ်ကြောင်း
ရှန်ဟိုင်းချီစက်အပြာရောင်မှိုနည်းပညာ Co. , Ltd
Tianhe ခရိုင်, ကွမ်ကျိုးမြို့ဦးစီးဌာန Yuancun Tricor အလှကုန်
Hai က Weiyi ခရမ်းရောင်အလှကုန် Co. , Ltd တွင်
Ouke ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ (Shenzhen) Co. , Ltd.
Dongguan Chuanghong Plastic Products Co. , Ltd.
Ltd. , Dongguan စီးတီး Hengtai ဓာတု Co. ,
ယန်အလှကုန် Co. , Ltd ကွမ်ကျိုး အကယ်.
Jiangmen စီးတီး, ရေကုသမှုနည်းပညာ Co. , Ltd ၏အရင်းအမြစ်
Ltd. , အလှကုန်ကုမ္ပဏီ၏ကွမ်ကျိုး Hui အနားသတ်
ဘုရားကျောင်းအလှကုန် Co. , Ltd ကွမ်ကျိုးခုနစ်ရက်ပတ်လုံး
ရှန်ကျန်းနည်းပညာ Co. , Ltd အလုပ်များဖြစ်ပါသည်
Dongguan စီးတီး Shek Pai ပလပ်စတစ်အပြောင်းအလဲနဲ့ဆိုင် tideland
Zhucheng တရုတ်သံမဏိစက် Co. , Ltd
Yiwu အသေးစားလည်း e-commerce ကုမ္ပဏီတခု
ကွမ်ကျိုး Ying ကဒုတိယ Tong ဇီဝနည်းပညာ Co. , Ltd
ရှန်ကျန်း Talent, Ltd. သတ္တု & ပလတ်စတစ်ထုတ်ကုန်များ Co. , ဖန်တီးရန်
စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံနှင့်, Ltd. နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေးကုမ္ပဏီအတွက် Jia စားနပ်ရိက္ခာပေါကြွယ်ဝ
Ltd. , မြင့်မားသောရုပ်တုအပြည့်အဝဗတ်,
Ltd. , ရှန်ဒေါင်းဝေ Xing စွမ်းအင်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
constant ChongChuanOu aryl အိမ်မှာအထည်အလိပ်စက်ရုံ
ကွမ်ကျိုးဖိုင်ဘာ-ဖူးတဲ့အဝတ်အစား Co. ,
Beichen ခရိုင်, Tianjin ဝေချစ်ခြင်းမေတ္တာအသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန်ရောင်းချမှုစင်တာ
Shouguang Baolong ရေစိုခံပစ္စည်း, Ltd.
Ltd. , Tianjin Hao ကမင်ဓာတု Co. ,
Ltd. , Foshan စီးတီး-မင်ဓာတုကုမ္ပဏီ၏ Nanhai ခရိုင်
Ltd. , ချန်ဒူးအိုင်ယာလန်အလှကုန်ကုမ္ပဏီ
Wujiang Jinyu ဓာတုချည်မျှင် Co. , Ltd
Haiao ပြပွဲချီစက် Co. , Ltd
Ltd. , ကုန်စည်ဒိုင် Co. , Dongguan စီးတီး Jetta
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကနျြးမာရေးစားနပ်ရိက္ခာ Co. , Ltd ၏ Kaiping အရင်းအမြစ်
Fu'an Baidong Power Equipment Co. , Ltd.
Changzhou ဓာတု Co. , Ltd လှုံ့ဆော်မှု
ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၏ဗျူရိုစီးပွားရေးအလျှင်အမြန်တိုးတက်နေတဲ့ဖြောင့်အနီရောင်ကလာပ်စည်း Longxing စက်မှုဝန်ဆောင်မှုဘူတာရုံ
Wujiang စီးတီး, Jin က Xiangrui ဓာတု Co. , Ltd
ကွမ်ကျိုးအတွက်အလှကုန် Co. , Ltd Make
Ltd. , ရှန်ဟိုင်းဆီလီကွန်-ပေါ်လီမာပစ္စည်းကုမ္ပဏီ,
Ltd. , ရှန်ဟိုင်း Jin ကမော်စီတုန်း Tai ဓာတု Co. ,
ရေစိုခံအဆောက်အဦးပစ္စည်းများ Co. , Ltd ဟန်ကျိုး Waugh
ကွမ်ကျိုးဓာတုနည်းပညာ Co. , Ltd အလှပြင်ဆင်ရေး
Beijing Baohai Weixing နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်
Ltd. , el Nido Nantong ဂျူဂျူချည်မျှင် Co. ,
Nano-ပစ္စည်းများ Co. , Ltd ၏ Dongguan ဘိုသူငယ်ချင်းများ
ဝူဟန်စီးတီး, Long ကဓာတု Co. , Ltd Pro ကို
Zhucheng Fosu ထုပ်ပိုးပစ္စည်းများ Co. , Ltd.
ဟူနန် Xin မျှော်စင်စက် Manufacturing Co. ,
Dongguan ဝေ-ဘောလုံးကိုလျှပ်စစ်နည်းပညာ Co. , Ltd
ဂွမ်ဒေါင်း Jiangmen Fine ဓာတုစက်ရုံအကြိုးရှိ
Huadu ခရိုင်, ကွမ်ကျိုးမြို့ပလပ်စတစ်ထုတ်ကုန်စက်ရုံချိတ်ဆွဲ
constant-bearing slewing Xuzhou, Ltd.
Hebei ထွန်းသစ်စ walnut ပျိုးပင်သမဝါယမ
Dongguan စီးတီး Asahi အာရှစက်မှု Co. , Ltd
Zhang က Jianhua
တစ်ဦးအလင်းတိကျစွာပလပ်စတစ်မှိုစက်ရုံအဖြစ် Zhenjiang ခရိုင်လမ်း
ဟန်ကျိုး Arden, Ltd. Machinery Co. , Filter
Ltd. , Changzhou နဂါး Silicon Co. ,
ကွမ်ကျိုး Baiyun ခရိုင် Sanyuanli သဘောထားကိုဒိုမိန်းအလှကုန်စီးပွားရေးစဉ်းစား
Ltd. , mu လုပ်နိုင်အီလက်ထရောနစ် (ရှန်ဟိုင်း) ထရေးဒင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
Zhe Jiang Linghui, Ltd.
Xingning စီးတီး, Liang အလှကုန်လက္ကားရေးဦးစီးဌာန
Tianjin သံမဏိကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd ဝမ် Dingsheng
Henan Zhengzhou အရက်စမ်းသပ်စက်ရုံ South-North Co. , Ltd.
Putian City Hanjiang ခရိုင် Jiangxia Aloe Development Co. , Ltd.
Pinghu Wanfeng ဓာတုဗေဒစီးပွားရေးဌာန၊ Shenzhen၊ Longgang ခရိုင်၊
Shenzhen Wanwei Optoelectronics Technology Co. , Ltd.
Zhongshan Tuoxiangzhe Optoelectronics Technology Co. , Ltd.
Zhongshan City, ရှေးခေတ်ခရစ်စမတ်အလင်းအရောင်းဌာန
Guangdong Wentao Optoelectronics နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Zhongshan Jingzhen Lighting Co. , Ltd.
Zhongshan Saiweisi မီးစက်ရုံ
Zhongshan Tellus Lighting Co. , Ltd.
Luoyang Rick Technology Co. , Ltd.
Jiangsu Tailai Reducer Co. , Ltd.
Nantong Gaojing Shuke Machinery Co. , Ltd.
Tai'an Taishan Ruixin ဘွိုင်လာစက်များ
Wucheng Luquan Tundezheng လေအေးပေးစက်စက်ရုံ
Botou Youte ဟိုက်ဒရောလစ်စက်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံ
ကွမ်ကျိုးဂဟေဆော်သည့် Auto Welding Equipment Co. , Ltd.
Shijiazhuang Honghe Anticorrosive Equipment Co. , Ltd.
Shanghai Xilang Electromechanical Technology Co. , Ltd.
Jingjiang Yiheng လေအေးပေးစက်ထုတ်လုပ်ခြင်းကုမ္ပဏီလီမိတက်
Henan Zhengzhou အရက်စမ်းသပ်စက်ရုံ Co. , Ltd.
Qingdao Shengfa Intelligent Technology Co. , Ltd.
Guangzhou Futao Microwave Equipment Co. , Ltd.
Shanghai Aitest Electronic Technology Co. , Ltd.
Botou Xiangmao ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေးစက် Co. , Ltd.
Suzhou Luxury Trading Co. , Ltd.
Shanghai Longke ကွန်ယက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်
Shenzhen Shengkai Technology Co. , Ltd.
Chengdu Tianhu Weishi Technology Co. , Ltd.
Luoyang Rick Cycle အသုံးချနည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Shenzhen China ပြည်ပခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီလီမိတက်တောင်ပိုင်းအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအရောင်းဌာန
Zhongshan Xiangdi Lighting Co. , Ltd.
Diane ရှန်ကျန်း Lighting Co. , Ltd
အလီ Tai ဟောင်ကောင်နိုင်ငံတကာ
ခရီးအမေရိကန် Cree ဖြန့်ဖြူး
Zhongshan Guzhen Lighting အစိတ်အပိုင်းများစက်ရုံ Kodak လျှို့ဝှက်ချက်
Ltd. , အင်ဂျင်နီယာကုမ္ပဏီ, မီးတရာအက္ခရာများ
Zhongshan စီးတီး Caravan Silicon ထုတ်ကုန်စက်ရုံ
ရှန်ကျန်းယုနည်းပညာ Co. , Ltd
Ltd. , third-hui Lighting နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Jiangmen စီးတီး Xinhui Fortune မဂ္ဂဇင်း, Ltd. Co. , Paint
Zhongshan Jia Liang ခံနိုင်ရည်ယဉ်ကျေးမှုမီဒီယာ, Ltd.
တရုတ် Ping An Zhongshan နျဌာနခှဲ
Anhui Machinery Co. , Ltd Changzhou ကို double
Xingtai စက် Manufacturing Co. , Bai Ying
Cass နန်ကျင်းအီလက်ထရောနစ် Co. , Ltd
ဝူဟန် Kowloon Tong Dacheng နည်းပညာ Co. , Ltd
လီမိတက် Zhongshan စီးတီး Xin ပြည်နယ်လျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ
Xingtai ဘဝရေသန့်ရှင်းရေးနည်းပညာ Co. , Ltd
ဂွမ်ဒေါင်း Chaozhou စီးတီးသန့်ရှင်း Ware Co. , တော်ဝင်ကျွန်း
ဂွမ်ဒေါင်း Tupperware ရေချိုးခန်း, Ltd.
Purcell စာတစ်စောင် (Xiamen) Co. , Ltd
Ltd. , ရှန်ဟိုင်း Mu အထူးလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ
Ltd. , ဟန်ကျိုး Shu ရီလျှပ်စစ်ကုမ္ပဏီ
Wenzhou အောင်မင်းနဲ့ Jia Valve Co. , Ltd
Ltd. , ရှန်ဟိုင်း Chao နျြ့ဘုရငျ့လျှပ်စစ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်
Ltd. , Yiwu Jinhong အထည်ချုပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်း Co. ,
Ltd. , Enping စီးတီး Ruifeng ချည်မျှင် Co. ,
Yichang စီးတီး, အမေရိကန်ဧလိယကကွန်ယက်နည်းပညာဝန်ဆောင်မှု Co. , Ltd
Shantou စီးတီးအထည်ချုပ်စက်ရုံ Kiki အတွက်ချန်ဆိုင်
Foshan Nanhai Jia အတွင်းခံအဝတ်အစား Co. , Ltd
Tianhe ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး Shaheed Yoshioki ခြေအိတ်စတိုးဆိုင်
Ltd. , ဖူကိုအလွန်ဝတ်စုံမှ
lang Sheng Co. , Ltd Changsha ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်
Cecil ကွမ်ကျိုး Animation ရဲ့နည်းပညာ Co. , Ltd
Wenzhou Zhijie ကစားကွင်းပစ္စည်း
Tongxiang ZhouQuan ပိုးစာပိုးသစ်တောထုတ်ကုန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း
ဆိုးလ်ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd Lianyungang ဟောင်ကောင်
Ltd. , Pinghu စီးတီး Kai ရှောင်ဖယ်စက်မှုပစ္စည်းကုမ္ပဏီ,
Foshan, ဟောင်ကောင်ဝေ Tai ဟာ့ဒ်ဝဲလက်ကားရေးဦးစီးဌာန
Yiwu ပိုပြီး Meng ကုန်စည်ဒိုင်စက်ရုံ
Bian Xu Yiwu e-commerce ကုမ္ပဏီတခု
စိန့်-အီလက်ထရောနစ်ဟာ့ဒ်ဝဲစက်ရုံ Zhuji စီးတီးရှိဆိုင်
Jiangsu နိုင်ပလတ်စတစ်နည်းပညာ Co. , Ltd အတွက်
ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးခြင်း Tools များစက်ရုံ Yongkang အမတ်
ZHERONG Fluke စတားကတ်ကြေးစက်ရုံ
Qingzhou ဟောင်ကောင် Xing hawthorn ဖြတ်ရောင်းအားဌာနချုပ်
Ltd. , Machinery Co. , ဖြည့် Qingzhou Hui ယူနိုက်တက်
အသက်ရှင်သောသတ္တဝါအဘို့အခက်ခဲ, ဘယ်လောက်အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်စက်မှုလုပ်ငန်းတရုတ်အမေရိကန်ကွဲပြားခြားနားမှု VS သန်းနှစ်စဉ်လစာ?
ငါးဆယ်-One မြောက်ဘက်ကိုပထမဦးဆုံးမိုးရွာရွာနှင့်နေရောင်ခြည်အပူချိန်အတက်အကျပြီးနောက်ဂရိတ်တောင်ပိုင်းမိုးရာသီ (ပုံ)
Tsai Ing-wen ပထမဦးဆုံးတုံ့ပြန်မှု Okinotorishima အငြင်းပွားမှုလက်သီး "အပြည့်အဝကိုခုခံကာကွယ်"
"ဧဝရက်ကေား" တောင်တက်သူရဲကောင်းလျူ Lianman 83 နှစ်ရှိပြီ၏အသက်အရွယ်မှာနာမကျန်းသေဆုံး
အနှိပ်ခံလေ့ကျင့်ရေးအသစ်ကယူနီဖောင်းလိုဂိုအဝတ် (မြေပုံ) ဝတ်ထားမနက်ဖြန်ကနေလက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့
အခြေခံအဆောက်အဦးညှိနှိုင်းမှုပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ၏ပြင်ဆင်မှုများအတွက်ခြုံငုံအစီအစဉ်များနှင့်အညီလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ဒေတာအတွက်ဒေတာများအတွက်ဒေတာ, အသီးအသီးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသစ်ကိုလိုဂိုအဝတ်ဝတ်ဆင်ရန်ယူနီဖောင်းကနေမနက်ဖြန် (မေ51 နေ့က) ကျင်းပပါလိမ့်မည်။ ယနေ့အသေး[ပို]
အနှိပ်ခံလေ့ကျင့်ရေးTsai Ing-wen လက် feed ကို "မင်္ဂလာဝက်" က၎င်း၏အဖွင့်ညစာစားပွဲဟင်းလျာများသို့ဝမ်းခွဲပါလိမ့်မည်
Tsai Ing-wen ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတိုက်ကျွေးဝက်, အဖွင့်ညစာစားပွဲပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ကိုးကားစရာသတင်းကန်ြယက်, မေလ52 ထိုင်ဝမ်မီဒီယာစီစဉ်ထားမတိုင်မီတူသော 520, ထိုင်ဝမ်အာဏာပိုင်များနှစ်စင်းညစာ menu ရဲ့ 8 ခေါင်းဆောင်မကြာသေးမီကထိတွေ့မှုစတင်ကပြောကြားသည်အစီရင်ခံတင်ပြ[ပို]
Cree lamp ပုတီးကိုအသုံးပြုခြင်း Xiaomi ၏လူအုပ်ကြီးမှပြောင်ပြောင်တောက်တောက် zoom ဆွဲမီးရောင်2020-05-21
Chengdu အမြွှာမျှော်စင်များပေါ်တွင် CREE မီးချောင်းထွန်းလင်းသည်2020-05-21
ရှန်ဟိုင်းမှာ 2018 ကြိုးပြပွဲ
2018 နှစ်ပေါင်း chic ရှန်ဟိုင်းဖက်ရှင် Show ကို
ရှန်ဟိုင်းခုနှစ်တွင်ယဉ်ကျေးမှု 2018 ပါလိမ့်မယ်
ရှန်ဟိုင်းမှာ 2018 Consumer Electronics Show
Guangdong Wholesale Network
[သောကြာနေ့9မှတနင်္လာနေ့: 00-18: 00]
လက်မှတ် upload လုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
နေအိမ်| 网络营销| ထုတ်ဝေခြင်းလုပ်ငန်းကို| နယူးလွှတ်ပေးရန်| post ကိုယ်ယူရန်| တုံ့ပြန်ချက်| အကူအညီလုပ်ငန်းများ| Service ၏စည်းမျဉ်းများ| ဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ| ဥပဒေဆိုင်ရာသတိပေးချက်များ| ကြှနျုပျတို့အကွောငျး|
ဆိုက်ကိုမြေပုံ| ရာထူးမြှင့်တင်ရေး| Advertising ကြော်ငြာန်ဆောင်မှုများ| ဆု| အလွဲသုံးစားမှုအစီရင်ခံစာ| RSS ဖိစ်| ကွင်းဆက်၏သူငယ်ချင်းများအဘို့အ Apply